Umzi mveliso weDesander | KwiChina Abenzi beDesander, abaXhasi
I-SD50 desander isetyenziselwa ikakhulu ukucacisa udaka kumngxunya wokujikeleza. Ayisihlisi kuphela iindleko zokwakha kodwa ikwanciphisa nongcoliseko lokusingqongileyo, isisiqwenga sezixhobo ezibalulekileyo kulwakhiwo lwaseburhulumenteni.
I-SD100 desander sisiqwenga sezixhobo ze-rig ezenzelwe ukwahlula isanti kulwelo lokomba. Izinto eziqinileyo ezirhabaxa ezingenakususwa zizikhuseli zinokususwa yiyo. I-desander ifakwe ngaphambili kodwa emva kwe-shaker kunye ne-degasser. Ukwanda kwamandla okwahlulahlula kwiqhekeza lentlabathi le-bentonite elixhaswayo lomsebenzi weepayipi kunye neendonga zediaphragm tunneling encinci.
I-SD-200 Desander sisicoci sodaka kunye nomatshini wonyango owenzelwe udaka olusetyenziselwa ulwakhiwo, ubunjineli besiseko seebhulorho, itonela elingaphantsi komhlaba lobunjineli kunye nolwakhiwo lobunjineli bokungakhuli. Iyakwazi ukulawula ngokufanelekileyo umgangatho odibeneyo wokwakha udaka, ukwahlula amasuntswana aqinileyo-eludakeni, ukuphucula inqanaba lokwakha ipore yesiseko semfumba, ukunciphisa inani le-bentonite kunye nokunciphisa iindleko zokwenza i-slurry. Iyakwazi ukuqonda ukuthuthwa kwendalo kunye nokukhutshwa kwe-slurry yenkunkuma kunye nokuhlangabezana neemfuno zokwakhiwa kwemvelo.
USinovo ngumvelisi wokuhambahamba kunye nomthengisi eTshayina. Ukuphambuka kwethu kwe-SD250 kusetyenziswa ikakhulu ekucaciseni udaka kumngxunya wokujikeleza.
Ukuphambuka kwe-SD500 kunokunciphisa iindleko zokwakha, ukunciphisa ukungcoliseka kwendalo kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle. Sesinye sezixhobo eziyimfuneko kulwakhiwo lwesiseko. Inokwandisa amandla okwahlulahlula kwiqhekeza lentlabathi elicolekileyo le-bentonite, umsebenzi wegrad oxhaswayo wemibhobho.